Uyenza njani i-Wall Wall eseludongeni- iiMuralists zokuHasha - Uyilo Lokuphefumlela
Uyenza njani i-Wall Wall eseludongeni- iiMuralists zokuHasha
UHLANGA KARYN R
Umzobo owenziwe nguAliya Smith kwivenkile yaseAtlanta.
Yintoni egqiba uyilo?
Emva kokuba ufumene umculi, uya kufuna ukuxoxa ngoyilo. Ndisebenze nomzobi osekwe eAtlanta u-Aliya Smith kwindonga esisekungeneni, kwaye xa sidibene, ndaxelela uSmith ukuba ndifuna iintyatyambo zenze isithuba esiziimitha ezili-18 ubude, kodwa sasiguquka kuhlobo olo. Ucebise ngeentyatyambo ezizodwa kum. Ukufunda ukuba usuka eFlorida kwandinceda ukuba ndikhokelele kubomi bezityalo. Kwaye xa undinike isikimu sombala, siyazihlonipha ukuba loluphi uhlobo lwezityalo ekufuneka zijongwe ngokukodwa, uyachaza. (Sahamba ne-poppy blush, iintyatyambo ezimhlophe zeorenji, kunye neentyatyambo ezi-orenji ezinqamlezayo kwimvelaphi yeti ehambelana neendonga zegumbi lethu lokutyela elikufutshane.)
Umzobo wesiko kwikhaya lombhali.
Kwangokunjalo, no-Nashville-based muralist u-Nathan Brown kutshanje upeyinte igama lekholaji kwigumbi lomculo wasekhaya. Umthengi uwubonile umsebenzi wam enolo hlobo, utshilo. 'Bafuna into emnyama namhlophe, kwaye bafuna ukufaka amagama angaphezu kwama-200 ezinto ezithetha okuthile kubo.'
Umzobi uNathan Brown usebenza eludongeni lwesiko.
Ingaba iza kubiza malini?
Akukho xabiso liqhelekileyo xa kuziwa kwimizobo; ingahluka ngokuphawulekayo ngumculi kunye nobubanzi beprojekthi. Xa amaxabiso esiqwenga, uBrown, abe mnye, abuze, Lingakanani ixesha lokuyila ekufuneka ndilibekile kule nto? Ndenze nje umsebenzi omhle kakhulu kutshanje apho kuye kwafuneka ndenze amahlazo angama-40, eyayiziiyure ezili-100 zexesha loyilo ndedwa. Xa uzama ukubethelela ixabiso eludongeni lwakho, jonga ukuba iimilo ezithile, imibala eyahlukeneyo, kunye nobukhulu beprojekthi ziya kuchaphazela iindleko. I-Murals akufuneki ukuba yaphule i-bank nangona. Uninzi lwee-muralists ezizayo kunye nezizayo ziya kuthi ziqwalasele iiprojekthi ezingaphantsi kwe- $ 1,000. Ngelixa olo ingelo tshintsho kwipokotho, ithenga isiqwenga sobugcisa bespoke ekhayeni lakho.
Ukupeyinta eludongeni endlwini yakho kungaphezulu kwendlela emnandi yokongeza umbala ogqabileyo. Ndicinga ukuba uluntu lwethu luyalamba kancinci ngamanye amaxesha, kwaye ubuncinci buphambili ngoku, utshilo uSmith. Ke ukongeza nje eludongeni olukhulu kwisithuba esincinci kwenza ingxelo enkulu.
uthenge indlu echibini
ukukhanya kwekrisimesi kwangaphandle
kwenzeke ntoni kubathengisi bamavili
ibernie sanders crochet unodoli